Rufu Ruchakundwa Sei?—Jesu Akakunda Rufu Sei?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Urhobo Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
ADHAMU naEvha pavakatadza vakaita kuti vanhu vese vave nechivi uye vafe. Asi izvozvo hazvina kuchinja chinangwa chaMwari chekuti vanhu vararame nekusingaperi. MuBhaibheri mune mavhesi akawanda anoratidza kuti chinangwa chaMwari hachina kumbochinja.
“Vakarurama vachagara nhaka yenyika, uye vachagara mairi nekusingaperi.”​—Pisarema 37:29.
“Achaparadza rufu zvachose, uye Changamire Ishe Jehovha achapukuta misodzi pazviso zvese.”​—Isaya 25:8.
“Muvengi wekupedzisira, rufu, achaparadzwa.”​—1 VaKorinde 15:26.
“Hapazovi nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa.”​—Zvakazarurwa 21:4.
Mwari “achaparadza” sei rufu? Sezvataona, Bhaibheri rinonyatsoratidza kuti ‘vakarurama vachagara panyika nekusingaperi.’ Asi rinotiwo “hapana munhu akarurama panyika anongogara achiita zvakanaka.” (Muparidzi 7:20) Saka zvinoreva here kuti Mwari acharegeredza mitemo yake kuti vanhu vanotadza vararame nekusingaperi? Aiwa hazvingamboiti nekuti ‘Mwari haarevi nhema.’ (Tito 1:2) Saka achaita sei kuti azadzise chinangwa chake chekuti vanhu vararame nekusingaperi?
MWARI “ACHAPARADZA RUFU ZVACHOSE.”​—ISAYA 25:8
RUDZIKINURO RWUNOTISUNUNGURA PARUFU
Jehovha Mwari akaita urongwa hwekuti vanhu vanunurwe parufu. Akabhadhara rudzikinuro rwaidiwa. Rudzikinuro mubhadharo wakaenzana nechinhu chinenge charaswa kana kuti chakanganiswa. Sezvo vanhu vese vari vatadzi uye vachifa, Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti: “Hapana kana mumwe chete wavo anogona kudzikinura hama yake kana kupa Mwari rudzikinuro nekuda kwake, (mutengo wekudzikinura upenyu hwavo unokosha kwazvo zvekuti havambofa vakaukwanisa).”​—Pisarema 49:7, 8.
Munhu ane chivi paanofa, anenge angobhadhara zvivi zvake chete; haakwanisi kuzvidzikinura kana kudzikinura mumwe munhu. (VaRoma 6:7) Saka paidiwa munhu asina chivi kuti ape upenyu hwake achifira zvivi zvedu.​—VaHebheru 10:1-4.
Ndizvo zvakabva zvarongwa naMwari. Akatuma Mwanakomana wake Jesu kubva kudenga, kuti aberekwe panyika semunhu asina chivi. (1 Petro 2:22) Jesu akati akauya ‘kuzopa upenyu hwake kuti adzikinure vanhu vazhinji.’ (Mako 10:45) Akafira zvivi zvedu kuitira kuti tikwanise kuzowana upenyu husingaperi.​—Johani 3:16.
RUFU RUCHAKUNDWA RIINI?
Tiri kurarama munguva “dzakaoma, dzinonetsa kurarama madziri” sezvakagara zvataurwa neBhaibheri. Izvi zvinoratidza kuti tava “mumazuva ekupedzisira” enyika ino yakaipa. (2 Timoti 3:1) Mazuva aya ekupedzisira achaguma ‘nezuva rekutongwa nerekuparadzwa kwevanhu vasingadi Mwari.’ (2 Petro 3:3, 7) Asi vanhu vanoda Mwari vachapona pachaparadzwa vakaipa uye vachapiwa “upenyu husingaperi.”​—Mateu 25:46.
Jesu akauya kuzopa “upenyu hwake kuti adzikinure vanhu vazhinji.”​—Mako 10:45
Kune vamwewo vakawanda vachawana mukana wekuzorarama nekusingaperi pavanomutswa. Jesu paakaenda kuguta rainzi Naini, akaona chirikadzi yakanga yafirwa nemwanakomana wayo. “Akasiririswa” nayo, ndokubva amutsa mwana wacho. (Ruka 7:11-15) Uyewo, muapostora Pauro akati: “Ndine tariro kuna Mwari . . . yekuti kuchava nekumuka kwevakarurama nevasina kururama.” Tariro iyi inoratidza kuti Mwari anotida.​—Mabasa 24:15.
Mabhiriyoni evanhu achararama nekusingaperi. Bhaibheri rinoti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, uye vachagara mairi nekusingaperi.” (Pisarema 37:29) Panguva iyi, vachafara kuona kuzadzika kwemashoko anonyaradza akanyorwa nemuapostora Pauro makore 2 000 apfuura ekuti: “Rufu, kukunda kwako kuri kupi? Rufu, kuruma kwako kuri kupi?” (1 VaKorinde 15:55) Muvengi wedu anotyisa achange akundwa!
Pane “mugwagwa” waunofanira kufamba nawo kuti uwane upenyu huchapiwa vanhu naMwari.